गाउँको अधिकार सिंहदरबारले कब्जा गरेको छ - Karobar National Economic Daily
गाउँको अधिकार सिंहदरबारले कब्जा गरेको छ
query_builderAugust 20, 2017 2:30 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1748
हृदयेश त्रिपाठी, नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
हृदयेश त्रिपाठी, नेपालको राजनीतिमा चिनाइरहनुपर्ने नाम होइन । बौद्धिकता र आफ्नो अडानमा अडिग रहने क्षमताका कारण त्रिपाठी नेपालको राजनीतिमा चर्चामा रहिरहने गरेका छन् । हाल मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीमा रहेका त्रिपाठी देशका हरेक मुद्धालाई गहनतापूर्वक हेर्ने र सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमताका कारण उनलाई राष्ट्रिय नेताकै रूपमा हेरिन्छ । यसअघि अरुलाई शक्तिशाली बनाउन मधेस इमान्दार भूमिकामा देखिए पनि अहिले भने आफैं एउटा शक्ति बन्न लागिरहेको तर शक्तिका रूपमा स्थापित भने नभइसकेको उनको विश्लेषण छ । सिंहदरबारको स्थायी सत्तालाई कसैले झुकाउन सक्छ भने त्यो तागत आजको दिनमा मधेसले मात्र राख्ने दाबी गर्ने त्रिपाठी निर्वाचनले मात्र राजनीतिक स्थिरता नआउने बताउँछन् । संविधान संशोधन विधेयक पारित भए पनि, नभएपनि असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी सहभागी हुने उनको भनाइ छ । मधेसमा अहिले बाढीको मार पर्नुमा चुरे विनास नै मुख्य कारण भएको बताउने त्रिपाठी चुरे नबचाउने हो भने अबको ३ दशकमा मधेसको ८० प्रतिशत भूभाग मरुभूमिमा परिणत हुने दाबी गर्छन् । प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता त्रिपाठीसँग बाढीको कहर खपिरहेको मधेसका समस्या, संविधान कार्यान्वयन र आसन्न निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीको सार ः
बाढीका कारण अहिले मधेस ठूलो पीडामा छ । तर, मधेस केन्द्रित दलहरू राहत र उद्धारमा सक्रिय भएनन् भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?
राहत र उद्धारमा मधेसका पार्टीहरू सक्रिय भएनन् भनेर भन्नु गलत तर्क हो । किनभने भूकम्प आउँदा तराईका पार्टीहरू र हामीजस्ता व्यक्तिहरू भूकम्प प्रभावितका लागि राहत कार्यमा जुटेका थियौं । मधेसमै समस्या आउँदा नजुट्ने भन्ने प्रश्नै छैन । जहाँ प्रभावित हुन्छ त्यहाँ राहत सामग्री उठाउन सकिन्न । हामीलाई काठमाडौं र अरु ठाउँमा कसैले राहत सामग्री दिने कुरा पनि आउँदैन । बरु राज्यले अहिले जे गरिरहेको छ यसमा मलाई लाग्छ कि त राज्यले भूकम्पको आयतननै बुझ्न सकेन र गम्भीरता नै बुझ्न सकेन । या झारा टार्ने मात्र काम भयो । दुखका साथ मैले भन्नुपरेको छ यो राज्य विभेदकारी नै छ । यसको चरित्र, स्वरूप सबै विभेदकारी छ । अहिले जुन आयतनमा बाढीको प्रभाव भएको छ यसअघि हाम्रो जीवनकालमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । चिन्ता के लागिरहेको छ भने, बाढीलाई अन्यत्र मोड्नलाई र फेरि राष्ट्रवादको नारा दिएर सबै बाँधका कारण नेपाल डुब्यो भनिँदैछ । ती बाँधहरू कहिले बने ? कसले बनाउन दियो ? त्यतातिर पनि ऐना देखाउन म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु । अर्को कुरा बाँधले मात्र हो भने प्रत्येक वर्ष डुब्नुपथ्र्यो । त्यस्तो त भएको छैन । मूल कुरा यसको जिम्मेवारी राज्यका सञ्चालकमाथी नै जान्छ । चुरेको अत्याधिक दोहनका कारण यो बाढीको प्रकोप आएको हो ।
२०३९ सालमा विदेशीहरूको रिपोर्टले चुरे बचाउन सकिएन भने मधेस बचाउन सकिन्न भनेको थियो । मरुभूमीकरण नै हुन्छ भनेर रिपोर्टमा भनिएको थियो । तर, चुरे समाप्त गर्ने र सुकुम्बासी, बाढीपीडितका नाममा मान्छे बसाउने गरिँदा चुरे समाप्त भएर गएको छ । जसको परिणाम हामीले भोग्नुपरिरहेको छ । यसमा मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई गाली गर्नुभन्दा पनि नेपालको बौद्धिक र जिम्मेवार जमातले राज्यले के व्यवहार गरिरहेको छ त्यो केलाउन जरुरी छ ।
मधेस केन्द्रित दल ब्यारेजका ढोका कम खोलिँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दा पनि बाँधका विषयमा किन मौन छन् भनेर पनि प्रश्नहरू उठाइएका छन् । तपाईंहरूको मौनता किन ?
कोशी ब्यारेज नखुल्दा अहिले त्यहाँ डुबान भएको हो ? म विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले लहडमा लाग्दिन । कोशी बयारेजका कारण कुन भाग डुबानमा परेको छ ? हो, कोशी ब्यारेज फुट्दा यसअघि सुनसरी, हरिपुरलगायतका थुप्रै क्षेत्र डुबान मात्र होइन बालुवामै परिणत भएको इतिहास हामीलाई थाहा छ । कोशी ब्यारेजको ढोका नखुलेको र गण्डकमा ढोका खुलेका कारण अप्ठ्यारो प¥यो भनेर दोहोरो चरित्र देखाइएको छ । दोहोरो चरित्रले मुलुक आक्रान्त नै छ । गण्डकका सबै गेट खोलिए त्यसले अप्ठ्यारो भो र कोशीमा गेट समयमै नखोलिँदा समस्या भो भनेर यहाँ भनियो । गण्डक सम्झौता र कोशी सम्झौता गर्दा के कुरा सही हो भने त्यतिबेला नेपाल प्राविधिक रूपमा अपरिपक्व थियो । गण्डक बाँधको शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू र राजा महेन्द्रले गरेको शिलालेखमा लेखेर राखिएको छ । अहिले महेन्द्रका चेलाहरूले पनि अराष्ट्रियभन्दा किन शिलान्यास गर्नुपरेको थियो ? महेन्द्रले के देखेर शिलान्यास गरेका थिए ? यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ ।
भौतिक संरचना बनाउँदा नै ध्यान दिइएन त्यसकारण बाढी आउँदा यति धेरै क्षती भयो भनेर प्राविधिकहरूले पनि भनिरहेका छन् । खास कारण के हो ?
वन विनाश बाढीको मुख्य कारण हो । वन विनाश नभएको भए बसोबास गराइँदैनथ्यो । राज्यको नीतिअनुसार नै वन विनाश गरेर बसाईएको हो । कुलो थियो, जंगल सुरक्षित थियो । यस्तो बाढी हामीले बाल्यकालदेखि बेहोर्नुपरेको थिएन । वन विनासलाई रोकेर फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकियो भने मधेस जोगिन्छ । सकिएन भने कसैले पनि जोगाउन सक्दैन ।
वन विनासनै कारण हो भनेर तपाईंले दाबी गरिरहँदा तथ्यांकले त नेपालमा जंगल बढेको दखाउँछ नि ?
वनमन्त्री भएकाले यसबारे पनि मलाई थाहा छ । मध्यपहाडका सामुदायिक वन परियोजनाले गर्दा त्यो डाटा देखिएको हो । भौगोलिक रूपमा पनि सबभन्दा कमजोर, लज्जालु भूभाग भनेको चुरे हो । चुरे जोगिएन भने जहाँसुकै वन लगाएर पनि काम छैन । तराई र चुरेको वन विनास भइसकेपछि अरु ठाउँमा वन लगाएर पनि काम छैन । जुन तथ्यांकको कुरा छ त्यसमा के बुझ्नुपर्छ भने मधेसका साझेदारी वन बनाइएन । हिजो जसले वन विनास गरे आज तिनै वन संरक्षक छन् । जसलाई वन विनास गरेर बसालियो तिनैलाई वनको रक्षक बनाइएको छ । म यो पनि भविष्यवाणी गर्छु कि, आउँदो ३ दशकमा मधेस ८० प्रतिशत मरुभूमि हुन्छ । त्यसपछि हामी तर्र्बुुजा उब्जाउँछौं अनि देशभरि तर्र्बुुजा खान्छन् । यथार्थ यही हो । तर, यो पचाउन नेपालका बौद्धिकहरू र राज्यलाई गा¥हो परिरहेको छ ।
हरेक वर्ष बाढी आउँछ र मधेसमा डुबान हुन्छ भन्ने कुरा पहिलै थाहा हुन्छ । तर पनि मधेसलाई नै आधारभूमि मान्ने दलहरूको एजेण्डामा यस्ता विषय नपर्नुको कारण चाहिँ के हो ?
मैले भौतिक आवास मन्त्री हुँदा केही काम अघि बढाउँदा खेपेको आलोचना, भएको अवरोध, चाहे फास्टट्र्याक होस् वा काठमाडौं सडक विस्तारको आयोजना हामीले नै गरेको हो । चाहे कसैलाई मन परोस् वा मन नपरोस् । राजनीतिक दलको एजेन्डामा पनि यी विषय छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको करिब ८५ वटा बैठकमा मैले यो विषय राखेको छु । संसद्मा त २०४६ सालदेखि कतिपटक राखियो कति ? जतिपटक जोडदार ढंगले यो विषय राखियो । त्यति पटक नै कार्यदल बनाइयो । कार्यदल कति पटक बने भनेर गणना गर्नकै लागि पनि अर्को कार्यदल बनाउनुपर्ने बेला भइसक्यो । तर, कार्यान्वयन केही भएको छैन । त्यसैले हामी विनासतर्फ जाँदैछौं । यहाँ कुनै वादले काम गरेको छैन । बर्वादवादले काम गरेको छ । केही दिनअघि पनि मैले साक्षात्कारमा यो कुरा बोलें । तर, मिडियाले लेखिदिएनन् । उनीहरूलाई रोचक लागेको विषय मात्रै लेखे । त्यसैले कुनै वाद र पार्टीको नभई राष्ट्रको मिडियाको खाँचो मैले देखेको छु । पार्टीहरूको मिडिया त धेरै पाएँ, देशको मिडिया म खोजिरहेको छु । देशभक्त मिडियाको खोजिमा छु, राष्ट्रवादी मिडिया धेरै छन् ।
अब निर्वाचनको विषयमा प्रवेश गरौं । असोज २ गते स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ । मधेसको आजको स्थिति के हो ? राजपाले निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन ?
दुईवटा कुरा स्पष्टसँग भन्छु, मधेसको आन्दोलन अहिले पछि परेको छ । शुरुदेखिनै लागेकाले मलाई थाहा छ यो झन्डै–झन्डै १ दशक नै पछि परेको छ । अहिलेको अवस्था यो हो । सवभन्दा दुखद् के भने, यो धेरै उचाईमा पुगेर झरेको छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा राजपा नेपालले पहिलो, दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिष्कार ग¥यो । बहिष्कार गर्नुपछि २ वटा कारण छन् । एउटा सैद्धान्तिक बहिस्कार हो अर्को उसको मजबुरी थियो । त्यो पार्टी पार्टीका रूपमा दर्ता भइसकेको थिएन । असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा चाहिँ राजपा नेपालले भाग लिन्छ । मेरो आफ्नो बुझाइमा भाग लिनुपर्छ । संशोधनको विषय अघि बढेकाले निर्वाचनमा भाग लिन आधार तय भएको छ । प्रदेश नम्बर २ कोर मधेस हो । अरु खस आर्य बाहुल्य प्रदेश नै हुन् । यो निर्वाचनमा राजपाले भाग लिनुपर्छ । तर, निर्वाचन हुँदैमा नेपाल स्थिरतामा जान्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो ।
मधेस आन्दोलन र मधेस केन्द्रित दल शिथिल देखिएका छन् । के मधेस आन्दोलनको रापसँगै मधेस केन्द्रित दलको ताप पनि घट्दै गएको हो ?
मधेस अन्दोलन आजको मितिमा पछाडि प¥यो । धेरै उचाइमा पुगेर तल आइपुग्यो । झन्डै एक दशक पछाडि फर्कियो । सबै मधेसवादी दलले पहिलो, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिए । तर, पहिलो र दोस्रो चुनाव राजपा नेपालले बहिस्कार ग¥यो । बहिस्कार गर्नुका २ कारण छन् । एउटा सैद्दान्तिक कारण । अर्को, पार्टीको हैसियत नै प्राप्त गर्न सकेको थिएन । तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपाले भाग लिन्छ । मधेस आन्दोलनमा घाइते, मृतक, आरोपितहरूका विषयमा राजपाको माग पूरा हुने अवस्था बनेकाले राजपाले निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था पनि बनेको छ । तर, निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने कुरा फगत एउटा भ्रम मात्र हो । जुन ढंगले संविधानमा निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । त्यो प्रणाली नै गलत छ । संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले सहमतीय सरकारको कल्पना गर्छ । तर, हामीकहाँ सहमतिको संस्कार नै छैन । त्यसो हुँदा स्थिरता हुँदैन ।
संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदैछ । विधेयक पारित भएन भने पनि तपाईहरू चुनावमा जानुहुन्छ तर, सँगै आन्दोलन पनि चाहीँ जारी रहन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हाम्रो अहिलेको पिँढीले नउठाए पनि आन्दोलन त चल्छ । मधेसका एजेन्डा अहिले पनि उत्तिकै सशक्त छन् । त्यसकारण जबसम्म ती विषय रहिरहन्छन्, एजेन्डा जिवित रहन्छन् । आन्दोलन त रोकिन्न । सिके लालजीले एउटा शब्द भन्नुभएको छ— स्थायी सत्ता । स्थायी सत्ताको यो रूप रहेसम्म नेपालमा आन्दोलनको कमी हुँदैन । यहाँ ठूलो भ्रम के छ भने चुनाव हुने बित्तिकै नेपाल स्थिरतामा गइहाल्छ । यो भन्नु भ्रम मात्र हो । विगतदेखिनै यो कुरा भन्दै आइएको छ । तर, देश अहिलेसम्म पनि अस्थिरतामै छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि करिब २ दशकपछि प्रदेश नम्बर २ बाहेकका स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसकेका छन् । योसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको छ, स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । के साँच्चै स्थानीय तहको निर्वाचनले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँमा वितरण हो ?
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लगिएको भनियो । तर, स्थानीय तहलाई सिंहदरबारले खटाएको अधिकार मात्र छ । घरजग्गा असुल गर्ने अधिकार मात्र छ । सिंहदरबारले खटाएका कर्मचारीलाई अधिकार छ । निर्वाचित सरकारलाई कुनै अधिकार छैन । जसको एउटा कार्य क्षेत्र र कार्यविधि नै बन्न सकेको छैन । सरकारले एउटा निर्णयले स्थानीय तहको सबै निर्णय बदर गरिदिनसक्छ भने त्यस्तो स्थानीय तहलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र मान्न सकिन्छ । त्यस्तो स्थानीय तहले के गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा वास्तवमा अब भने सिंहदरबारले वैधानिक रूपले, कानुनी रूपले गाउँलाई पनि कब्जा गरेको छ । काम, कर्तव्य, अधिकार थाहा नपाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । अहिले स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जुन किसिमको विधेयक बनाईंदैछ । त्यसमा सिंहदरबारले नै स्थानीय तहमा खटन–पटन चलाउने व्यवस्था ल्याइँदै छ । स्थानीय तहमा पार्टीमा योगदान गरेका असल कार्यकर्ताले नेतृत्व पाउनुको साटो बोर्डिङ स्कुल चलाउने, क्रसर उद्योग चलाउने जस्ता व्यक्तिनै स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् । यसले गर्दा नेपालको स्थानीय तहकै भविष्य अन्धकार देखिएको छ ।
संविधान संशोधनको विषय टुंगिएर स्थानीय निर्वाचन असोज २ मा सकिएलगत्तै मंसिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने तयारी छ । त्यसपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको मार्गप्रशस्त हुन्छ भनिएको छ । के यो पनि भ्रम मात्रै हो त ?
त्यो पनि भ्रम नै हो । यो संविधानमा अनगिन्ति संशोधन हुनुपर्छ । बरू के गर्न सकिन्छ भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी जसले संविधान जारी गरे उनीहरू मात्र बसेर एकतर्फी संशोधन ल्याए पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूको लाज पनि बच्नेभयो । मुख्य कुरा संविधानलाई कार्यन्वयनयोग्य बनाउनुप¥यो । होइन भने यसको हविगत २०४७ सालको संविधान जस्तै हुन जान्छ । एउटा संशोधन नहेरिकन त्यसको अवशान भयो र कोही मलामी जान पनि पाएनन् । संविधान भनेको त एउटा स्थिर डकुमेन्ट होइन । तर यसलाई त्यस्तै बनाइएको छ । अहिले संशोधनको प्रक्रिया कस्तो छ भने कसैले चाहेर मात्र संशोधन हुने अवस्था छैन । एक त अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जसमा कसैको बहुमत आउँदैन । प्रदेशसँग सम्बन्धित संरचना यस्तो बनेका छन् की संसद्को दुइटै सदनको दुई तिहाई त कहिले पनि पुग्न सक्दैन । दिन त कस्तो आउँदै छ भने कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरूले चाहेर पनि संविधान संसोधन नहुने भयो ।
स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । यसले मधेसमा अहिले उठेका विषय समाधानमा पनि सहजता होला नि ?
स्थानीय तहको बनावट पनि जनसंख्याको अनुपात र भागलाई हेरेर नै बनाइनुपर्छ । म एउटा उदाहरण भन्छु, मेरै जिल्लामा जुन अहिले गाउँपालिका छ त्यहाँको जनसंख्या ४८ हजार छ । तर, मेरै जिल्लामा ३५ हजार मतदाता छन् । यो कसरी भयो ? के मापदण्ड हो यो ? मेरै जिल्लामा एउटा वडाको जनसंख्या १३ हजार छ । कुन माइकलालले यो धर्तीमा त्यसलाई पुष्टी र प्रमाणित गर्न सक्छ । स्थानीय तह बनाउँदा जनसंख्या नै इन्कार गरेर गरियो । कुरो किन हो भने यसको दूरगामी प्रभाव छ । प्रमुख उपप्रमुखहरू मेयर उपमेयर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा सदस्य मतदाता हुुने भएकाले मधेसमाथी यो प्रहार गरिएको हो । अधिकार समाप्त गरिएको हो ।
पछि आएर जनसंख्या र भूगोल दुवै हेर्ने भनियो नि त होइन ?
होइन, त्यो त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा हो, त्यो जुन भनिएको छ । त्यो पनि ‘ओरिजिनल’ संविधान जारी गर्दा भनिएको थिएन । पहिले भूगोल त्यसपछी जनसंख्या थियो । पहिलो संशोधनले जनसंख्यालाई अगाडि सारेको हो । संसारमा जनप्रतिनिधि हुन्छन् । रूख प्रतिनिधि, नदी प्रतिनिधि, ढुंगा प्रतिनिधि, बाँदर प्रतिनिधि हुँदैनन् । यो संसारको डेमोक्रेसीको नियम हो ।
हामीले थुपै्र समस्या र चुनौतीका बारेमा चर्चा ग¥यौं । अब समाधान के त ?
हतारमा संविधान जारी गरियो । जोस, उमंग र भावुकतामा स्थानीय तहलगायत निर्माण गरियो । तर, यो संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने दुई ठाउँमा जानुपर्छ । राष्ट्रपतिकहाँ बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि । र, अर्को सर्वोच्चमा यसको व्याख्या गराउन । जनप्रतिनिधि संस्थाहरू कमजोर छन् यसमा । हामीले मधेसको मात्रै कुरा गर्यौं भनेर अरुले पिठ्युँ फर्काए । तर, पिठ्युँ फर्काउनेले डन्डा खान पनि तयार हुनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरू जसरी प्रस्तुत भए । गैरराजनीतिक चरित्र गाउँमा पनि बढ्ने देखिएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा सबैभन्दा बढी अपराधबोध छ । उहाँहरूले अपराध गरेको थाहा पाउनु भएको छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेर सच्याउनुभन्दा पनि अपराध ढाक्न अर्को अपराध र गल्ती थप्दै गइरहनुभएको छ ।
निर्वाचन संविधान मधेस राष्ट्रवाद राष्ट्रिय जनता पार्टी कोशी ब्यारेज